Wafdi uu hoggaaminayo Farmaajo oo ku wajahan Beledweyne | Somsoon
Home WARAR Wafdi uu hoggaaminayo Farmaajo oo ku wajahan Beledweyne
Wafdi uu hoggaaminayo Farmaajo oo ku wajahan Beledweyne
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa saacadaha nasoo aadan ku wajahan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo ka ag dhaw madaxtooyada.
Horay sacadii lasoo dhaafay waxaa Beledweyne u gaaray wafdi heer wasiirro ah oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kale waxaa magaaladaas ku qulqulaya gaadiid sida agabyo kala duwan iyo raashin gurmad loogu fidinayo dadka reer Beledweyne oo u baxay daafaha magaalada, iyadoo wali la soo sheegayo in ay jiraan dad ku go’doonsan qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada.
Gadiid sida gargaar loogu tala galay dadkaas oo ka soo baxay gobolada Galmudug, Puntland iyo Somaliland ayaa si isdaba jooga ah u soo gaaraya magaalada Beledweyne.
Sidoo kale magaalada Muqdisho iyo qeybo kale oo ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka ayaa gurmad dhanka hawada ah lagu gaarsiinayaa dadka ay cayreysay fatahaadda wabiga Shabeelle.
Dhanka kale waxaa jira qaar ka mid ah qoysaskii ka barakacay Beledweyne oo sheegay in wali aan la gaarsii wax caawinaad ah, sidoo kale dadka kunool deegaano kale oo hoos taga magaalada Beledweyne ayaa iyaguna dalnaya in gurmad lala soo gaaro.
Article horeDiyaaradaha Yahuuda oo weerar ka geystay Gasa
Article socoda Baarlamaanka Puntland oo sharci darro ku tilmaamay codsigii uga yimid Xeer ilaalinta